Friday, 26 Apr, 2019 12:06 PM
देश ‘सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली’ को नारासहित अघि बढेको छ । तर, सुख र समृद्धि त्यति राम्रोसँग देखिएन भनिँदैछ । संविधानले पनि देशलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ । सरकार त झन् पाइला–पाइलामा समाजवादतिर हिँडिरहेको भनिन्छ । तर, परिस्थिति फरक छ । परनिर्भर अर्थनीति छ । दलाल पुँजिवादले यसरी जरो गाडेको छ कि, त्यसबाट उम्किन तत्काललाई सम्भव छैन । समाजवादी यात्राका अभियन्ताहरु नै दलाल पुँजिवादलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सामान्य कार्यकर्ता पनि निजी सम्पत्तिको मोहबाट मुक्त हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, हामीकहाँ नेतृत्व तहमै रहेका नेताहरु निजी सम्पत्तिप्रति कति आशक्त छन् भन्ने कुरा विभिन्न घटना र सन्दर्भहरुले बताइरहेका छन् । सामाजवाद निर्माणको मुख्य आधार भनेको सहकारीतामा आधारित अर्थ व्यवस्था, समुदायकेन्द्रित विकास, निर्माण हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र खानेपानीजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता नै परिपूर्ति नभएको स्थिति एकातिर छ भने यी तीनै आधारभूत आवश्कतामाथि व्याापरिकरणको चरम प्रभाव छ । आधारभूत विषयहरु नै सामाजकेन्द्रित छैनन्, सामाजिक स्वामीत्वमा ती विषय छैनन् भने यही स्थितिमा टेकेर भोलि–पर्सि नेपालमा समाजवाद आउँछ भन्ने कुरा कि हाँस्नका लागि, कि रुनका लागि मात्रै काम लाग्ने विषय हो । कार्यान्वयन जटिल छ ।
एकातिर सरकार नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कुरालाई सहज बनाउने भनेर लागिपरेको छ, अर्कातिर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई यतै रोक्ने नीतिमा पनि छ । यो दुनियाँमा मर्ने र बाँच्ने दुबै नीति उत्तिकै प्रभावकारी रुपमा अबलम्बन गरिएको कहिँ छैन, नेपालबाहेक । युवालाई विदेश जाने बाटो सजिलो पनि यही सरकारले बनाउन खोज्दैछ, यतै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सरकार उत्तिकै तल्लिन छ भनिँदैछ । तर, सरकारको नीति के हो ? युवालाई विदेश हैन, यतै रोजगारी दिइन्छ भनिएको हो भने वैदेशिक रोजगारीमा अझ कडाइँ हुनुपर्ने हो । हैन, यहाँ रोजगारीको सम्भावना छैन भनेर विदेश नै पठाउने गरी अझ जोडतोडले लाग्नुपर्ने हो । यस्तो अन्यौलग्रस्त कार्यशैलीले समाजवाद आउँछ भनेर पत्याउन गाह्रो छ । फेरि, युवा जनशक्ति देशबाट पलायन भएर आउने समाजवाद कस्तो हुन्छ ? यो पनि गम्भीर प्रश्न हो । देश निर्माणमा युवाको सहभागिता हुँदैन, भोलि खाने बेलामा आएर बसिदिए पुग्नेखालको समाजवाद ल्याउन लागिएको हो भने त्यस्तो समाजवादचाहिँ नआएकै राम्रो हुन्छ ।